काँग्रेसले गर्यो लकडाउनको ५० दिनको ५७ बुँदे समिक्षा, संक्रमितको संख्यामा छलाङ सरकारको अर्कमण्यताको परिणाम – Kantipur Hotline
काँग्रेसले गर्यो लकडाउनको ५० दिनको ५७ बुँदे समिक्षा, संक्रमितको संख्यामा छलाङ सरकारको अर्कमण्यताको परिणाम
काठमाडौ बैशाख ३१, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले लक डाउनको ५० दिनेमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी सरकारी कामको समीक्षा गरेको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोरोना विरुद्धको संघर्षमा यसबीचमा के उपलब्धि भए र कमजोरी के–कस्ता रहे त्यसको वस्तुगत समीक्षा र आगामी दिनको यात्राबारे धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । देशब्यापी रूपमा लक डाउन भएको बैशाख ३० गते ५० दिन पुरा भएको छ । यो अवधिमा एकातर्फ नेपाली जनताले कष्टकर दैनिकी बिताउनु परेको र अर्थतन्त्रले ठुलो क्षति ब्यहोरिरहेको काँग्रेसको निष्कर्ष छ ।
यो अवधिमा प्रतिपक्षको जिम्मेवार भूमिका
(१) नेपाली कांग्रेसले यसविचमा एक जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा ‘सरकारमा संगै नरहेर पनि संकटमा संगै लड्न सकिन्छ’ भन्ने नीति तय ग¥यो र कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्न हरसंभव सघाउने कार्य ग¥यो । सरकारको कोषमा तत्कालै एकमुष्ट आर्थिक सहयोग देखि देशब्यापी सचेतना र राहतमा पार्टीका साथीहरूको भूमिका रह्यो । देश बाहिर नेपाली जनसम्पर्क समितिहरु सम्पूर्ण रुपले राहतमा सकृय रहे । पदाधिकारी बैठकहरुका अलावा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिकै बैठक पनि सामाजिक दुरी कायम राखेर यस बीचमा कोरोना बिशेष रुपमै सम्पन्न भयो ।
नीजि क्षेत्र र ब्यवसायिको पीडा राज्यले अनुभुति गरेन
(३१) मुलुकको राजस्व र रोजगारीको क्षेत्रमा ठुलो हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई लक डाउनले पु¥याएको गम्भीर असर प्रति राज्यको चासो यो अवधिमा देखिएन । निश्चित आकारको ऋणको निश्चित समयसम्मको ब्याज मिनाहा देखि, ब्याज न्यून गर्ने, विविध कर घटाउने लगायतका बिषयमा सरकारको पहलकदमी न्यायोचित ढंगले विस्तारित रुपमा प्रकट भएन ।
अन्य रोगका बिरामीप्रति सरकार झनै असंंवेदनशील
(३२) मानिसको मृत्यु कोरोनाले मात्रै होइन अन्य रोगले पनि हुन्छ भन्ने यथार्थलाई यो पचास दिनमा हलुकै ढंगले नजरअन्दाज गरिएको छ । यो अवधिमा खासगरी डायलाइसिस गराइरहेका बिरामी र गर्भवती महिलाहरु लक डाउनले बढी संकटमा परे । अन्य विभिन्न रोगका बिरामी कयौंलाई नियमित उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सरकार विल्कुलै गम्भीर देखिएन ।
(३३) कोरोना उपचारका लागि अलग्गै केन्द्रहरू निश्चित गर्ने दायित्व सरकारले निर्वाह नगर्दा नियमित अस्पतालहरुमा अन्य बिरामीलाई असर त प¥यो नै, संक्रमणको विस्तार तिनै अस्पतालहरुबाट भएको बाहिरका कतिपय देशको अनुभवको पृष्ठभूमिमा अर्को गम्भीर जटिलता यो अवधिमा थप भएको छ ।
संचार माध्यम प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण ब्यवहार
(३४) यो अवधिमा नेपाली मिडियाले प्रतिकुल स्थितिमा जोखिमपूर्वक ढंगले समाचार सम्प्रेषण गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे । तर सरकारले श्रमजीवी पत्रकार या संकटमा परेका मिडिया हाउसलाई यो अवधिमा राहतको कुनै घोषणा सम्म गरेन ।
(३५) यो अवधिमा विभिन्न संचार माध्यमा कार्यरत कयौं पत्रकार बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य भए, सरकारको त्यसप्रति कुनै सहानुभूतिपूर्ण र समाधानमुखी सहयोगी भूमिकादेखिएन ।
(३६) कतिपय संचार माध्यममा यो अवधिमा ‘सत्ता भाइरस’ को संक्रमण भयो । निश्चित ब्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिएको कारण स्पस्टिकरण र कार्वाहीका प्रक्रिया चले ।
(३७) चुनौती झेलेर सूचना सम्प्रेषणको कर्तव्य निभाइरहेका संचारमाध्यमप्रति स्वयं प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी आपत्तिजनक रह्यो । संचार माध्यमले अस्थिरता फैलाउन खोजेको उहाँको आरोप तथ्यपूर्ण त थिएन नै उहाँको पदीय गरिमा अनुरुप पनि थिएन ।
(३८) जोखिममा कार्य गरिरहेका पत्रकारहरुको ब्यक्तिगत सुरक्षामा सरकारको गम्भीरता अपेक्षित थियो । तर त्यसमा सरकार संंवेदनशील देखिएन लक डाउन पचासौं दिनमा पुगेकै दिन पर्सा जिल्लामा पत्रकारहरु पनि कोरोनाबाट संक्रमित भएको पुष्टि भएको
विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य बारे सरकार दृष्टिकोण विहिन
(३९) लक डाउनले लाखौं विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्यौलमा पारेको छ । एसइइ परिक्षा स्थगित छ भने अन्य परिक्षा देखि पठनपाठन सम्पूर्ण रुपले ठप्प छ । अब शैक्षिक क्षेत्र कसरी अघि बढ्ने, विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य बारे सुविचारित योजना के हुनसक्दछ, यसबारेमा यो पचास दिनको अवधिमा निश्चित परिपक्व दृष्टिकोण निर्माण गर्ने हुन सकेको छैन ।
(४०) कतिपय शैक्षिक प्रतिष्ठानले प्रारम्भ गरेको अनलाइन कक्षा सकारात्मक छ । ईन्टरनेट पुगेका ठाउँमा ‘पढाइका लागि निशुल्क इन्टरनेट’ उपलब्ध गराउने र ईन्टरनेट नपुगेका ठाउँमा के गर्ने भन्ने बारे सुस्पट योजना राज्यले सार्वजनिक गरेर विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको भविष्यप्रति आश्वस्त बनाउन सरकारले बिशेष ध्यान तत्काल दिन जरुरी छ ।
बिदेशमा रहेका नेपाली बारे शंवेदना शुन्य सरकार
(४१) लक डाउन शुरु भएपछि दार्चुला पारी धार्चुला आइपुगेका करिब ८ सय नेपालीलाई बन्द स्कुलहरुमा क्वारेन्टाइन बनाएर राख्न चौतर्फी अनुरोध र दबाब हुंदा पनि सरकारले सुनुवाइ गरेन । भारतमा अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनको दोहोरो अवधि पूरा गरेर पनि देश भित्रिन निरन्तर संघर्ष गर्नु प¥यो तिनले ।
(४२) कुवेत, युएई लगायतका देशले आफ्नै खर्चमा नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याइदिने प्रस्ताव पठाएका छन् । तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म न त सकारात्मक जवाफ पठाएको छ न त तिनका लागि राजधानीमा पर्याप्त क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने कार्य गरेको छ ।
(४३) बिदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई एकसाथ देश फर्काउन निश्चयनै संभव छैन र सबै फर्कन चाहेका छन् भन्ने पनि होइन । तर अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको स्थिति वर्गीकरण गरेर विधिवत रुपले तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यको थालनी समेत यो अवधिमा भएको छैन ।
(४४) विभिन्न देशमा श्रमिक पछि पढाइ रोकिएर अलपत्र परेका विद्यार्थी, मानसिक पीडामा रहेका तिनका अभिभावक, भारतका विभिन्न शहरमा अलपत्र परेका तिर्थ यात्री, उपचार गर्न या आफन्त भेट्न गएर विभिन्न देशमा रोकिएका नागरिक, यी सबैलाई देशले आफ्नो देश छ भन्ने अनुभुति यो बीचमा गराउन नसक्नु झनै फरक पिडाको बिषय भएको छ तिनका लागि ।
मानवीयता के बाट संक्रमित हुंदैछ ?
(४५) हामी कहाँ तीन तहको सरकार छन्, तर यो अवधिमा बुटवलमा एक युवकको लाशले आफू जल्नका लागि १० दिन सम्म सरकारको बाटो हेर्नुप¥यो ।
(४६) धार्चुलामा रोकिएका नेपाली मध्ये एक किशोरको आमाको मृत्यु हुंदा पनि अन्तिम पटक आमाको अनुहार हेर्न उनलाई आउन दिइएन । यस्तो नितान्त मानवीय संंवेदनशीलताको बिषयमा पनि विशेष निर्णय र विशेष ब्यवस्थापन गर्ने सोच सरकारले नराख्नु वास्तवमै यो अवधिको अत्यन्तै पिडाको चित्र मध्येको एक प्रतिनिधि नमूना थियो ।
(४७) रोल्पाको त्रीवेणी गाउँ पालिकामा बेवारिसे बम बिस्फोटमा परेर ४ नाबालकको निधन यो अवधीमा भयो । यस्तो बेला परिवारजनले सरकारको कुनै सहानुभूति पाएनन् । दाङको पोस्टमार्टम हाउस बाहिर आफ्ना कलिला नानीहरुको लास कुरेका बसेका अभिभावकले बरु ठिक त्यही समयमा प्रधानमन्त्रीको अब आँसु खस्दैन भन्ने कविता उपहार पाए ।
सहिष्णुता, शुशासन र शान्ति सुरक्षाको कोणबाट
(४८) मिडिया र सामाजिक संजालले अस्थिरताको पक्ष लिएको आरोप यहि अवधिमा प्रधानमन्त्रीले लगाउनु भयो । उहाँको अभिव्यक्ति एकातर्फ असहिष्णु त थियो नै, उहाँको आरोप तथ्यपूर्ण थिएन ।
(४९) स्वास्थ सामग्री खरिद प्रकरणमा उठेको भ्रष्टाचारको प्रश्न तथ्यपूर्ण ढंगले संचारमाध्यमले बाहिर ल्याउंदा, दोषीलाई पदमुक्त गरेर छानबिनमा सघाउन प्रतिपक्षले माग गर्दा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई खारेज गर्दै निर्दोषिताको फैसला आफैले सुनाउनु भयो । सुुशासनको मान्यता बर्खिलाफको प्रवृत्ति थियो त्यो ।
(५०) एक सांसदको अपहरण मुद्दा सम्म दर्ता गर्न प्रहरी कार्यालयले सरकारको दबाबमा अस्वीकार ग¥यो यो बिचमा । कानूनी राज्यको मान्यता विपरीत कदम थियो त्यो ।
(५१) ¥यापिड टेस्टको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेपछि विश्वभर रोक्ने क्रम चल्दै गर्दा सरकार एक लाख ¥यापिड टेस्ट कीट किन्ने ठेक्का सम्झौतामा लाग्नु एकातर्फ असान्दर्भिक र अर्कातर्फ राज्यकोषको अर्थहीन ब्ययको अनुचित कदम थियो ।
(५२) सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेका नागरिक लक डाउनको समयमा सरकार संग जाउलोको प्रतीक्षामा थिए । त्यो प्रबन्ध गर्ने कृयाशिलता तर्फ अयोग्य साबित हुँदै गरेको सरकारले यो अवधिमा सुकुम्बासी आयोग गठन गर्नु असान्दर्भिक र निश्चित राजनैतिक नियतको कर्म थियो ।
(५३) लक डाउनको अवधिमा पनि कयौं हत्या र बलात्कारका घटना देशमा भएको विवरण आएका छन् । लक डाउन पचास दिन पुगेकै दिन बैशाख ३० गते लाहानमा एक युवाको लास टाउँको गिंडिएको अवस्थामा उनकै खेतमा फेला प¥यो । नेपाल प्रहरीकै तथ्यांक अनुसार पनि रोल्पाको बम बिस्फोटबाट भएको नाबालकहरुको हत्या बाहेक दर्जनौं हत्या र दर्जनौं बलात्कारका घटनाले सिंगो देशलाई मर्माहत बनाउने कार्य गरिरहेका छन् ।
कृषि र कृषकको पीडाले सरकार भेटेन
(५४) लक डाउनको अवधिमा पनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न बाहिरबाट आयात भएको छ भने नेपाली कृषकको उत्पादनले बजार नपाउंदा उत्पादन खेर गएको छ । यो अवधिमा तरकारी, फलफूल लगायतका खाद्यान्न संगै मासुजन्य उत्पादनको ब्यवसायलाई परेको असर न्यून गर्न राज्यको कुनै दृष्टि नपर्नु दुःखद छ ।
(५५) कोरोनाको संक्रमण यहि गतिमा बढ्दै गयो र उत्पादनको क्षेत्रमा ब्यवस्थित कार्य योजना साथ कार्य गर्न सकिएन भने त्यसले निकट भविष्यमा चरम खाद्यान्न संकट तर्फ मुलुकलाई पु¥याउन सक्छ । यो दिशामा यो अवधिमा परिपक्व र दूरदर्शी रणनीति थालनी गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर कार्ययोजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।
(५६) खेतिको मौसम शुरु भएको यो घडी सरकारले सबै खाले खाद्यान्न उत्पादनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर कृषि क्षेत्रलाई विशेष राहतको योजना ल्याउने पहलकदमी गर्न जरुरी छ ।
(५७) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं आगामी बजेटको मुख्य प्राथमिकता कोरोना सचेतना, स्वास्थ सामग्री, उपचार, राहत, उद्दार र पुनस्र्थापनामा केन्द्रीत गर्न जरुरी छ ।
लक डाउनको बितेको पचास दिनको चित्र पचास दिनको प्रकृति मुचुल्का हो । कमजोरी केलाएर त्यसलाई तिब्र गतिमा सच्याएर अघि बढ्नु भन्दा अर्को विकल्प हाम्रा सामु छैन । कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने हाम्रो साझा कर्तव्य निर्वाह गर्न बितेको दिनको समिक्षाले हामीलाई आगामी दिनको यात्रामा सघाउ पु¥याउने विश्वास नेपाली कांग्रेसले लिएको छ ।
— लक डाउनको ५० दिने समिक्षा —सकारात्मक दुवै काम अधुरो र विवादास्पद रहे । दर्जनौं छन् बेथितिका मुद्दा ।देशब्यापी रूपमा…
Gepostet von Nepali Congress am Mittwoch, 13. Mai 2020
भूमि अतिक्रमण विरुद्ध प्रदर्शन
परीक्षणको दायरा बढेसंगै संक्रमितको सख्या पनि ह्वात्तै बढ्यो , संक्रमित सख्या २ सय ४३ पुग्यो